Vakamuka pamba pacherwa makuva 5 . . . Mumwe ndokufa asina kurwara . . . Mabasa ehuroyi aya: Sabhuku – Makuhwa.co.zw
VAGARI vekwaMashayamombe, kuMhondoro, vakasara vasina neremuromo apo vakafumoona pane mumwe musha pakacherwa makuva mashanu matsva, nechepakati pawo pakapunzirwa hari nekuiswa machira matsvuku ainge akasungwa-sungwa zvishwe.
Hapana ati aziva kuti izvi zvakaitwa nani uye nechinangwa chei.
Sezvinonzi mashura aya mashoma, pamusha pakaitika izvi pakabva pafiwa nemunhu asina kurwara.
Makuva matsva aya akafuma achionekwa kunzvimbo ine mamwe marinda mubhuku raMarenga nemusi weMugovera, 27 Kukadzi apo ivhu rakacherwa raitova nyoro.
Nzvimbo inovigwa vafi iyi iri padyo zvikuru nemugwagwa unobva muHarare uchidarika nepaMubayira kuenda kuChegutu.
Vagari vemumusha uyu vachingobva kunoona makuva aya, pakabva pafa mumwe mukadzi anova mwana wasabhuku asina kurwara.
Makomba emakuva aya akacherwa pakati pezvuru zvitatu zvine makuva emumusha waMarenga.
Pamakuva mashanu aya, maviri acho akakura seevanhu vakuru kuchiti matatu akainzana neanovigwa vana.
Makuva aya akacherwa akasiyaniswa chinhambwe pakati pawo asi anoratidza kuti pakashandiswa mapiki nemafoshoro achitonyatsoyerwa sezvagara zvichiitwa panovigwa mufi. Ivhu racho raiunganidzwa kudivi rimwe chete.
Vakatanga kuona izvi vanoti mukati memakuva aya makaonekwa makatsikwa netsoka dzevana bedzi, izvo zvava kunzi nevamwe itsoka dzezvidhoma.
Sabhuku Marenga, VaChrispen Marenga (89), vanotsanangudza nyaya iyi asi vachiti havazive kuti izvi zvinorevei.
“Takafumoona makuva mashanu akacherwa kunzvimbo yatinoviga vafi. Makomba emakuva aya akacherwa pakati pezvuru zvitatu zvatinoviga vashakabvu vedu,” vanodaro.
Nzvimbo yakacherwa makuva husiku iyi yakareba mamita mazana maviri kubva panoperera musha wekwaMarenga uye hapana akanzwa ruzha rwekuchera musi uyu.
Sabhuku Marenga vanoenderera mberi vachiti: “Makomba aya akatanga kuonekwa nemadzimai ainosungirira mbudzi kunzvimbo iyi avo vakazondizivisa. Nyaya iyi ndakatoisvitsa kwaMambo Mashayamombe nekumapurisa eZRP ekwaMubayira.
“Uku kushereketa kukuru kwehuroyi. Pakati pemakuva aya pakapunzirwa hari ndokukandwa machira matsvuku akasungwa mapfundo matatu uye pane masanzu akasiiwapo seanoiswa pamusoro pemakuva.”
Vanoti mwanasikana wavo, uyo ange asingarware, akabva afa mushure mekubva mukunona makuva aya.
“Chinoshamisa ndechekuti mwana wangu, Efa Marenga Chaitezvi, uyo ange akaroorwa achigara kuHarare, akabva afa tichangobva kuona makuva aya asi ange asingarware
Related Topics:VAGARI vekwaMashayamombeVakamuka pamba pacherwa makuva 5
Akarohwa nemheni pachipatara